एउटीमात्र विवाह गरे जन्मकैदको सजाय ! यो कस्तो ठाउँ ? « News24 : Premium News Channel
एउटीमात्र विवाह गरे जन्मकैदको सजाय ! यो कस्तो ठाउँ ?
एजेन्सी । विश्वमा एउटा यस्तो राष्ट्र पनि रहेको छ जहाँ एउटा विवाहमा मात्र सिमित रहेमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ । दोस्रो विवाह नगरेकै कारण बाँकी जीवन जेलमा बिताउनुपर्ने अजबको नियम अफ्रिकी राष्ट्र इरीट्रियाको हो । यस देशको कानुन अनुसार पुरुषले अनिवार्य रुपमा नै दोस्रो विवाह गर्नुपर्छ ।
यदी पुरुषले अर्को विवाह गर्न नमानेमा उनलाई जेलमा हाल्ने काम गरिन्छ । यतिमात्र होइन यदी महिलाले आफ्नो पुरुषलाई अर्को विवाह गर्न रोकेमा महिलालाई समेत कारबाही हुन्छ । साथै महिलाका कारण पुरषलाई पनि सजाय हुने नियम रहेको छ ।
सरकारको यस नियमका कारण देशमा गृहयुद्धको शिकार भएको थियो । यसै कारण देशका धेरै सैनिकहरुको ज्यान गएको छ । सन् १९९८ देखि २००० सम्म पुरुषहरुको संख्यामा ठुलो कमी आएको थियो । बहुविवाहका कारण यस देशमा महिला संख्या कम भएको छ । सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै हरेक महिलालाई विवाह गर्न निर्देशन दिने गर्छ ।